गृहपृष्ठ - हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, संवाददाता October 3, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठ्माण्डौ। आइतबार बेलुकी भएको खेलमा लालिगा अन्तर्गत, इस्पानियलले रियल मड्रिडलाइ २-१ को गोलान्तरले पराजित गरेको छ। १७ औ मिनेटमा अग्रता लिएको घरेलु टोलि एस्पानियलका लागि राउल डि टोमसले गोल गरेका थिए भने एसिस्ट चाहि एड्रियन एम्बर्बाले दिएका थिए। खेलको सुरुवाती समयमै गोल गरेपछि दबाब बनाउन सफल भएको […]
Optimus Prime October 2, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| प्रिमियर लिगमा म्यानचेष्टर युनाइटेडको केही खेल यताको खराब प्रदर्शनले निरन्तरता पाएको छ। अघिल्लो साता घरेलु मैदानमा एस्टनभिल्ला सँग एक शुन्यले हार बेहोरेको म्यानचेष्टर यूनाइटेड आज एभर्टन सँग १-१ गोल को बराबरीमा रोकिएको छ। आश्चर्यजनक रूपमा आज पाउल पोगवा र क्रिष्टियानो रोनाल्डोलाई बेन्च राखिएको खेलमा एभर्टनका तर्फ […]
साफ च्याम्पियनसिप आजबाट शुरु हुदै: उद्घाटन खेलमा नेपाल र माल्दिभ्स भिड्ने
Optimus Prime October 1, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिप फुटबल आज बाट सुरु हुँदैछ। माल्दिभसले आयोजना गर्ने यसपालीको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा यसपाली ५ टोली समावेश रहेका छन्। पाकिस्तान र भुटानका टोलीले यसपाली सहभागिता जनाउने छैनन्। आज दिउँसो हुने उद्घाटन खेलमा नेपाल र माल्दिभ्स आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। […]
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, संवाददाता September 30, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठ्माण्डौ। युनाइटेडलाइ पेनाल्टीमा पराजित गर्दै युरोपाको जितेको भिल्लारियल र युनाइटेड बीच गएराती अर्को प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गोल बिहिन पहिलो हाफ पछि दोस्रो हाफमा तिन गोल गोल हुन पुग्यो। पहिलो हाफमा पाहुना टोलि भिल्लारियल निकै धेरै मौकाहरु पाएता पनि, किपर डेभिड डिगियाको उत्कृष्ट बचाउले गर्दा, कुनै पनि […]
आफ्नै घरेलु मैदानमा रियल मड्रिड मोल्डोभाको क्लब शेरिफसंग पराजित !!
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, संवाददाता September 29, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाण्डौ । च्याम्पियन्स लिगको समूह डि अन्तर्गतको खेलमा, फुटबल क्लब शेरिफले रियल मड्रिडलाइ २-१ को गोलान्तरले पराजित गरेको छ। च्याम्पियन्स लिगमा प्रवेश गरेको नया टोलि फुटबल क्लब शेरिफले मड्रिडलाइ आफ्नै माटोमा पराजित गर्दै, समूह तालिकाको शिर्षस्थानमा आफुलाई राखेको छ। २५ औ मिनेटमा अग्रता लिएको शेरिफले राम्रो अलअराउण्ड […]
युसिएल । डोनारामा चम्किदा, म्यानचेस्टर सिटिबिरुद्द पिएसजीको महत्वपुर्ण जित !!
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठ्माण्डौ । समुह क अन्तर्गत गएराती भएको पेरिस सेन्ट जर्मन र म्यानचेस्टर बीचको खेलमा, पिएसजी २-० को गोलान्तरले बिजयी भएको छ। सुरुवाती मिनेटबाटै रोमाञ्चक देखिएको खेलमा, पहिलो अग्रता भनेको घरेलु टोलि पेरिस सेन्ट जर्मनले लिएको थियो। ८ औ मिनेटमा एम्बाप्पेले निकालेको उत्कृष्ट मौका, नेयमारले छुटाउन पुगे र […]
च्याम्पियन्स लिग । शाख्तरसंग बराबरीमा रोकियो इन्टर मिलान
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाण्डौ। च्याम्पियन्स लिगको समुह डि अन्तर्गत भएको खेलमा, इन्टर मिलान र शाख्तरबिचको खेल बराबरीमा टुङ्गिएको छ। समूह डि मा रहेका टोलीहरु भने यसप्रकार छन् : रियल मड्रिड, फुटबल क्लब शेरिफ, इन्टर मिलान र शाख्तर। आजको खेल पछिको अंक तालिका हेर्दा, टोलिहरुको स्थान माथि उल्लेख गरेनुसार रहेको हो। […]
अन्तिम मिनेटको गोलसंगै हारबाट जोगियो बार्सिलोना, खराब लय जारी !
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, संवाददाता September 21, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठ्माण्डौ। गएराति भएको खेलमा बार्सिलोनाले ग्रानाडासंग बराबरीको खेल खेलेको छ। क्याम्प नौमा भएको खेलमा ग्रानाडाले सुरुवाती मिनेटमै अग्रता लिएको थियो। सर्जियो एस्कुडेरोको सुदर एसिस्टलाइ गोलमा परिणत गर्दै, दोमिन्गोस डुआर्टेले ग्रानाडाका लागि अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो मिनेटमै अग्रता लिए पनि, ग्रानाडालाइ जित सुरक्षित गर्ने दबाब भने खेलभरि नै […]
भिनिसियस र बेन्जेमाको गोलमा, रियल मड्रिडले गर्यो उत्कृष्ट कम्ब्याक !
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, संवाददाता September 20, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठ्माण्डौ। लालिगा अन्तर्गत गएराती भएको खेलमा भिनिसियस जुनियर र करिम बेन्जेमाले उत्कृष्ट गोल गर्दै, रियल मड्रिडलाइ भ्यालेन्सिया बिरुद्द बिजयी पारेका थिए। घरेलु टोलि भ्यालिएन्सियका लागि ६६औ मिनेटमा डुरोले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। उक्त अग्रता संगै दबाब सिर्जना गरेको भ्यालेन्सियाले खेलको अन्तिम समयसम्म पनि राम्रो डिफ़ेन्सिब काम […]